Iimveliso zeMveliso nabaPhambili | Yongeza
● Inkonzo eyenziwe ngokwezifiso:
Siphuhlise uthungelwano lwabavelisi abayi-1000 bonke ngaphezulu kwe-China.
● Inzuzo yamaxabiso:
Sibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kumanqaku ahlukeneyo exabiso lenza ukuba kube lula kuwe ukulungiselela iimfuno zoluhlu olubanzi nabagcini bakho abathengi.
● Isampulu yasimahla:
Sinika iisampulu zasimahla ngokusekwe kwiimfuno zakho ezithile zokuhlola i-quagey yeemveliso zethu.Ikubaluleke kakhulu kuthi ukufumana into oyifunayo ngokuchanekileyo.
● Ukuqinisekisa umgangatho:
Sinemigangatho ephezulu kakhulu yokulawula kwaye kubandakanya ukuhlolwa kwezinto eziqhubekayo kwi-SGS, i-BV kunye ne-TUV enika abathengi bethu beminyaka emi-5 ukuya kweli-10 isiqinisekiso sisebenza ngeendlela ezahlukeneyo zeemveliso.
● Ukuhanjiswa ngokukhawuleza:
Siyathembisa ukuthunyelwa kwinyanga enye emva kokufumana idiphozithi.Dula ixesha elixakekileyo, ixesha lethu elinokulungiswa linokuhlengahlengiswa ngokufanelekileyo.lungise lonke kubaluleke kakhulu kwiqela lethu.
● Inkonzo ebalaseleyo:
Iqela lethu elinamava, iQela eliQhelekileyo le-WIL linikezela ngenkonzo ebalaseleyo yomthengi yonke imihla.Ndiyafuna inkxaso yemveliso, iisampulu, amaxesha emveliso, ahlala ulapha.
● Kufanelekile ukuthembana:
Okwangoku sinenethiwekhi yokuhambisa kumazwe angaphezu kwama-20, iYurophu ne-Asiya.Asenze sazise ukuba sinokukwenza intsebenziswano entsha!
I-FGV yohlobo lwesilayidi se-FGV yedrawer xa ithelekiswa neemveliso ezifanayo kwintengiso, ineengenelo ezingenakuthelekiswa nanto ngokwendlela yokusebenza, inkangeleko yokusebenza kwimarike. . Inkcazo yesilayidi se-FGV sohlobo lweDrawer inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.Iphepha leKhabhinethi yeKhabhinethi yeKhabhinethi ye-FGV yeDrawer Sheare kwi-Operth Shoreware nge-Craft ebalaseleyo kunye nexabiso elisebenzayo.